तिन कम्पनिहरुको १ अर्ब ५७ करोड बढीको आईपीओ आउँदै, कुन कुनको कति कति ? - UjyaloNepal
२०७८ श्रावण १५ गते, शुक्रबार प्रकाशित
तिन कम्पनिहरुको १ अर्ब ५७ करोड बढीको आईपीओ आउँदै, कुन कुनको कति कति ?
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेवोन)ले तीन जलविद्युत कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति दिएको छ ।
तीन कम्पनीलाई कुल १ अर्ब ५७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५७ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमित दिएको हो । बोर्डबाट ङादी हाइड्रोपावर, साहस उर्जा र बुद्धभुमी नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनीले आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति पाएका हुन् ।
तीनै वटा कम्पनीले स्थानिय बासिन्दा र सर्वसाधारणको लागि आईपीओ निष्कासन धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएका हुन् ।
जसमध्ये ङादी हाइड्रोपावरले ४० करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ४० लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति पाएको हो । उक्त आईपीओ निष्काशनका लािग कम्पनीले साउन ११ गते अनुमति पाएको हो । बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
त्यसैगरी साहस उर्जा लिमिटेडले १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५ लाख आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति पाएको हो । कम्पनीले उक्त आईपीओ निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डबाट साउन १४ गते अनुमति पाएको हो ।
बिक्री प्रबन्धकमा एनआइबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । त्यसैगरी बुद्धभूमि नेपालले १२ करोड रुपैयाँ बारबरको १२ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न साउन १४ गते बोर्डबाट अनुमति पाएको छ । बिक्री प्रबन्धकमा सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ ।
किन पटक पटक सर।दै छ कांग्रेस महाधिवेशन ?
न्यादी हाइड्रोपावरले ४० लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्दै
लगानीकर्ताहरुका लागी खुसिको खबर,बिभिन्न नौ कम्पनीको शेयरमा सर्किट
पहिलो पटक नेपाल ग्यास कम्पनी आईपीओ जारी गर्ने तयारिमा
२०७८ भाद्र १२ गते, शनिबार प्रकाशित उज्यालो नेपाल 0
जीवन विकास लद्युत्तिका शेयर धनिहरु मालामाल
२०७८ भाद्र २ गते, बुधबार प्रकाशित उज्यालो नेपाल 0